Naya Post Nepal | प्रकाशको गीत डेलिट गर्न ध’म्की दिनेहरुलाई चुनौती, खबरदार भन्दै आए पुण्य् गौतम ! (भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशको गीत डेलिट गर्न ध’म्की दिनेहरुलाई चुनौती, खबरदार भन्दै आए पुण्य् गौतम ! (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । जनयु’द्ध’मा सहभागी जनमुक्ति सेनाको दुःखमा आधारित भएर बनाइएको १६ मिनेट लामो गीतलाई माओवादी निकट व्यक्तिहरुले दबाब दिँदै तत्काल हटाउन चे’ता”वनी दिएका छन् ।
गीत संगीत यति शक्तिशाली भई दिन्छ कि कहिले काही ठुलै हलचल मच्चाई दिने गर्छ । प्रकाश सपुत यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यर्थाथ परक बिषय वस्तुलाई लिएर गीत संगीत प्रस्तुत गर्दै आएका चर्चित गायक प्रकाश सपुतले गीतकै कारण ध’म्कि खेप्नु परेको खुलासा भएको छ ।
उक्त बिषयमा आधरीत गीतमा खबरदार भन्दै पुण्य गौतम मिडियामा आएका छन । प्रकाश सपुतको गीत डेलिट गर्ने धम्की दिनेहरुलाई चुनौती दिन्छु भनेका छन । उक्त बिषयमा आधारीत भिडियो हेर्नुहोस् ।
गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत ‘पिर’ सार्वजनिक भए लगत्तै माओबादीलाई पर्नु पिर परेको छ । माओवादी सशस्त्र द्ध’न्द्धपछि टाठाबाठाले सत्तामा पहुँच पुर्याएको तर सोझासाझाले भने सास्ती भोग्नुपरेको कथा भिडिओमा देखाउन खोजिएको छ।
यहि बिषयलाई गीतको माध्यमबाट प्रस्तुत गरेपछि माओबादीले भने गीत हटाउन चेतावनी दिएको छ । जनयु’द्धमा सहभागी जनमुक्ति सेनाको दुःखमा आधारित भएर बनाइएको १६ मिनेट लामो गीतलाई माओवादी निकट व्यक्तिहरुले दबाब दिँदै तत्काल हटाउन चेतावनी दिएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रसम्बद्ध अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले सपुतलाई गीत हटाउन चेतावनी दिँदै भनेकी छिन् सर्वाजनिक रुपमा माफी मागेर तत्काल युट्युबबाट गीत नहटाए गैरजिम्मेवार हर्कत सहेर हामी बस्दैनौँ । यसैबीच प्रकाशको गीत २४ घण्टा नबित्दै युट्युब ट्रेन्डिङको एक नम्बरमा आई पुगेको छ ।
शुक्रबार साँझ सपुतले आफ्नै युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको गीत आईतबार बिहान सम्ममा १० लाख ३६ हजारभन्दा बढीले हेरिसकेका छन् । १६ मिनेट २५ सेकेन्डको भिडियोमा प्रकाश आफै र सुरक्षा पन्त फिचर्ड रहेका छन्। गीतको सबैले समर्थन गरेका छन् ।
२०७८ फाल्गुन २९, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 6719 Views